1. ကခငျြရိုးရာ ပလှမေိတျဆကျ - ကခငျြမွသေနျးဆောငျ
eBook file size: 102 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၃ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ၊ အတှဲ ၂၊ အမှတျ ၄၂ ထုတျ ဂီတပဒသောမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါ သညျ။ Download -Related Articles- ကချင်မြေ မြောက်ဖျားပိုင်းစွန်းမှ ...
2. သျှမ်းရိုးမ စွယ်စုံ အဘိဓာန် (Daily Update)
... ငိုယိုကာ ရင်ထုလို့လေး။" မှာ၊ ပ ၆၉။(ဟိန္ဒီ၊ ကစရာ။) ကချော်ကချင်း - ကြိဝိ၊ အချွတ်ချွတ် အမှားမှား။ ကချော်ကချွတ် - ကြိဝိ ၁၊ အလွဲလွဲ အမှားမှား။ ၂၊ ပေါ့ပေါ့တန်တန်။ ကချင် - နံ၊ တိဗက် မြန်မာ စကားမျိုးကို ပြောသည့် ...
... ကြေးစေတီတော် သမိုင်းစာတမ်း သိန္နီမြို့ စ၀်ကော်မိန်းဘုရားသမိုင်းအကျဉ်းချုပ် ကချင်ပြည်နယ် အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္ဇူ ဂန္ထ၀င်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ် စန္ဒာမုနိဘုရားသမိုင်း မိုးနိုင်းစေတီတော်သမိုင်း ဖောင်တော်ဦးဘုရားသမိုင်း ...
4. မွောကျပိုငျးက ​လျောဝျေါမြား - ဗနျးမျောကြျောဝငျး
eBook file size: 72.9 KB ebook pages:4Publication: ​၁၉၆၉ ခုနှဈ၊ ဖဖေျေါဝါရီလ၊ အမှတျ ၁ဝ၄ ထုတျ ငှတောရီမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- ကချင်မြေ မြောက်ဖျားပိုင်းစွန်းမှ ...
5. ဖောငျတျောဦး ဘုရားသမိုငျး နှငျ့ သြှမျးပွညျ ရာဇဝငျအကဉျြးခြုပျ
... ရှိ သုဓမ်မဝတီပုံနှိပျတိုကျ၌ ရိုကျနှိပျ၏။ ၁၉၅၅ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလတှငျ ပထမအကွိမျ၊ ၁၉၅၇ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလတှငျ ဒုတိယအကွိမျ အဖွဈ ပုံနှိပျဖွနျ့ခြိ သညျ။ Download -Related Articles- ကချင်ပြည်နယ် ...
6. သမိုငျးဝငျ မိုးဗွဲမှတေျောဓာတျစဈ ဘုရားသမိုငျး
... - မစ္စတာမောင်မှိုင်း မန့်ခမ်းစေတီတော် သမိုင်း(နမ့်ခမ်းမြို့) သီပေါမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနှင့်ဝိဇယမာန်အောင် ကြေးစေတီတော် သမိုင်းစာတမ်း သိန္နီမြို့ စ၀်ကော်မိန်းဘုရားသမိုင်းအကျဉ်းချုပ် ကချင်ပြည်နယ် ...
7. ကခငျြအမြိုးသားတို့၏ ပဋိညာဉျစာခြုပျ - ကခငျြမွသေနျးဆောငျ
eBook file size: 52.2 KB ebook pages:3Publication: ၁၉၇၂ ခုနှဈ၊ ဩဂုတျလ၊ အမှတျ ၄၁ ထုတျ စန်ဒာရုပျစုံမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- ကချင်မြေ မြောက်ဖျားပိုင်းစွန်းမှ ...
8. ကခငျြပွညျနယျ ရဝမျစီရငျထုံး - ဦးအောငျသနျးထှနျး
9. The Kachin Tribes Of Burma မွနျမာနိုငျငံ ကခငျြလူမြိုးမြား By W.J.S Carrapiett(Former Member of the Frontier Service of Burma)
... တွဲ၍ ဖော်ပြရေးသားထား၏။ ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများမှာ- ၁။ ရိုးရာအစဉ်အလာသမိုင်း ၂။ ကချင်လူမျိုးတို့၏စိတ်ဓာတ်နှင့်ဓလေ့စရိုက် ၃။ ကျေးရွာတည်နေရာပုံစံနှင့်ရွာသူရွာသားများ ၄။ ကချင်အိမ်နှင့်ကချင်မိသားစု ...
10. မုံးမြိတ်၊ ဆင်လီ ကချင်ဆပ်စတိတ်သမိုင်း
(မှတ်ချက်။) Information Only ကချင်သမိုင်းပညာရှင် သုတေသီများ၏ရေးသားချက် ဖြစ်သည်ဟု အမှာစာတွင် ဖေါ်ပြထား၏။ တန်ဖိုးမှာ ၂၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး စာမျက်နှာပေါင်း ၂၂၀ ပါဝင်၏။ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း မပါရှိပေ။ စာအုပ်တွင် ...
11. ကချင်မြေ မြောက်ဖျားပိုင်းစွန်းမှ ရ၀မ်သွေးချင်းများ - M.မျိုးနောင်
eBook file size: 108 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ အတွဲ(၃၆)၊ အမှတ်(၄)ထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ကချင်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများ ...
12. ချဲငိုချဲ နှင့် ၀ါခီး - ကချင်မြေမောင်ခင်တွယ်
eBook file size: 85.7 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၇၄-ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ အမှတ်(၆၀)ထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ကချင်လူမျိုးတို့၏အက အကြောင်းကို တင်ပြထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်၏။ Download ...
13. ခငျြးတိုငျးရငျးသား ယဉျကြေးမှု ရိုးရာဓလထေုံ့းစံမြား
... ပေးပို့ပါသညျ။) Download -Related Articles- ကချင်တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုံးစံဓလေ့များ ...
14. သိင်္ဂီရွှေစင်ချောင်း - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်
... ဒေါ်ခင်သက်သည် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ နမ့်ခမ်းရွာသို့ သွားရောက်ကာ လေ့လာရေး ခရီးသွားစာပေ အဖြစ် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ရှမ်းအမျိုးသမီး စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်သက် (ခ) ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်၏ ...
15. ရှဝါနန်ခကျီး နှင့် ဂျိန်းဖော့ - နိုင်သူ(ကချင်)
eBook file size: ebook pages: Publication: ၁၉၆၈-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- တရုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး - ဂျင်းဖောတိုင်းရင်းသားလူမျိုး
16. သွေးချင်း တိုင်းလိုင်ရှမ်းတို့၏ အပျိုလူပျိုဓလေ့ - မြန်ဂုဏ်ဆောင်(ကချင်မြေ)
eBook file size: 49.1 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ်၊ ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်၌လာသော ဆောင်းပါး။ download
17. ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အမည်များ လေ့လာချက်
eBook file size: 122 KB ebook pages: 14 download
18. ကချင်ပြည်နယ် အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္ဇူ ဂန္ထ၀င်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ်
eBook file size: 1.57 MB ebook pages: 142 ပုံနှိပ်ခြင်း - ပထမအကြိမ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဒေါ်တင်ကြည်နှင့်သားများပုံနှိပ်တိုက်၊ ဆိုင်းတန်း၊ မန္တလေး။ download